Umthetho WOKUBUYISA – Ifanitshala yeBaothian Co., Ltd.
Ukuze kuphuculwe inkqubo emva kwentengiso kwaye uzame ukwenza abathengi baneliseke ngakumbi, inkampani isebenzisa inkqubo yokubuyisa kunye neyotshintshiselwano. Abathengi abahlangabezana nembuyekezo kunye neemeko zotshintshiselwano kwaye bavunyiwe ukuba babuye okanye batshintshe, Nceda usebenzise le migaqo ilandelayo (ngaphandle kwezinye iinkqubo zokubuya kunye notshintshiselwano ezichaziweyo kwiimveliso ezizodwa):
Ukubuyisa kunye nokuTshintsha iiNjongo:
Bonke abathengi abathenga iimveliso zenkampani, ngaphandle kwendlela yokuhanjiswa kunye nendlela yokubhatala, ingabuya kwaye itshintshise iimpahla ngokwemiqathango.
Ukubuya kunye neMeko zoTshintshiselwano:
1) Iimveliso ezinengxaki zomgangatho (inkampani ayinaxanduva lweengxaki ezisemgangathweni ezibangelwa zizizathu zayo).
Iimpahla ezibuyisiweyo kufuneka zihlangabezane nezi meko zilandelayo:
Iphakheji yeempahla igqityiwe (kubandakanya ukupakishwa kwangaphakathi nangaphandle), kwaye iimpahla kufuneka zikwimeko yoqobo lwentsha kraca kwaye zingasetyenziswa, kwaye imeko efanayo naleyo wawuyifumana ngayo impahla, engachaphazeli ukuthengisa okwesibini;
Ngaxeshanye, Buyisela ibhokisi yokupakisha yoqobo kunye nokuhanjiswa kwempahla, kunye nazo zonke izixhobo, iilebheli, amatyala emithwalo, iziqinisekiso zemveliso, imiyalelo, ii-invoyisi (ukuba kukhona enye) nazo zonke izipho (ukuba kukhona enye).
Ukusingathwa kwendlela yokubuyiselwa kwemali
Emva kokufumana iimpahla ezibuyiswe nguwe ngaphakathi kwexesha elichaziweyo, ukuba iimpahla kunye nezixhobo (ukuba kukhona enye) ziqinisekisiwe ukuba zikwimeko entle, kunye neelebheli, ii-invoyisi nezipho (ukuba kukhona enye) zigqityiwe, inkampani iyakubuyisa intlawulo oyibhatalele iimpahla kuwe ngokomthetho.
4、 Amanyathelo okhuseleko kukuBuya nokuTshintshiselana:
Ukuba iimpahla ezibuyisiweyo azihambelani nemiqathango yale nkqubo yokubuya kunye nokutshintshiselana, inkampani yethu ayiyi kwamkela ukubuya kwakho kunye notshintshiselwano, kwaye asinakuyibona imbuyekezo.
Ukuba uyasilela ukubuyisa i-invoyisi, izixhobo okanye izipho (ukuba kukhona enye), inkampani inelungelo lokutsala ixabiso lentengiso kwirhafu ye-invoice, izixhobo okanye izipho ezivela kwintlawulo oyenzileyo.
Ukuba awuyibuyisi i-invoyisi, izixhobo okanye izipho ngokulandelelana, kodwa inkampani ayikhuphi ixabiso lentengiso kwi-invoice tax, izixhobo okanye izipho, okanye ayifuni ukuba ubuyisele amanqaku kunye nezixhobo ezichazwe apha ngasentla, ayizukuthathwa njenge nkampani ukurhoxisa amabango afanelekileyo.
Abathengi banokubiza umnxeba emva kokuthengisa kwenkampani ukuze babonisane.
4、 Eli lungelo lingentla alisebenzi kwii-odolo zezi ndidi zorhwebo zilandelayo:
Iimveliso ngentando, Ezifana neemveliso ezibhalwe ii-inishiyali zoMthengi okanye zenzelwe abathengi;
Naziphi na ezinye iimveliso umthengi axelelwe ukuba azinakubuyiswa ngenxa yendalo yakhe xa umthengi engenisa iodolo.
Ukuphucula inkqubo emva kwentengiso，Zama ukwenza abathengi baneliseke ngakumbi，Inkampani ibaleka、Inkqubo yotshintshiselwano。Abathengi abahlangabezana neemeko zokubuya notshintshiselwano kwaye bavunyiwe ukubuya kunye nokutshintshiselana，Nceda wenze ngokwale migaqo ilandelayo (ezinye iimali ezibuyiswayo ezichazwe kwiimveliso ezizodwa)、Ngaphandle kwenkqubo yotshintshiselwano)：
Nye、Ukubuyela umva、Tshintshiselana ngento：
Bonke abathengi abathenga iimveliso zenkampani，Nokuba yeyiphi na indlela yokuhambisa kunye nendlela yokubhatala，Unokubuyiselwa imali ngalo mgaqo、Tshintshiselana。
Mbini、Ukubuyela umva、Iimeko zotshintshiselwano：
1、Iimveliso ezinengxaki zomgangatho (iingxaki zomgangatho wemveliso zibangelwa zizizathu zazo，Inkampani ayinaxanduva)。
2、Iimpahla ezibuyisiweyo kufuneka zihlangabezane nezi meko zilandelayo：
Gcwalisa ukupakishwa kwemveliso (kubandakanya ukupakisha kwangaphakathi nangaphandle)，Imveliso kufuneka ibe yintsha kraca kwaye ingasetyenziswa kwimeko yayo，Kuyafana nakwilizwe xa ufumana iimpahla, Ayichaphazeli intengiso yesibini；
Buyisela ibhokisi yentsusa kunye nokuhanjiswa kwempahla ngaxeshanye，Zonke izixhobo、Ileyibheli、Imithwalo yetyala、Isiqinisekiso semveliso、Inkcazo、I-invoyisi(Ukuba kukhona enye)Kwaye zonke izipho(Ukuba kukhona enye)。
Ujongana njani nembuyekezo
Emva kokufumana iimpahla ubuyile ngaphakathi kwexesha elimiselweyo，Izinto eziqinisekisiweyo kunye nezixhobo(Ukuba kukhona enye)Injalo，Ileyibheli、Ii-invoyisi nezipho(Ukuba kukhona enye)Gqibezela，Inkampani iyakubuyisela intlawulo oyibhatalele iimpahla ngokomthetho。
Zine、Ukubuyela umva、Amanyathelo okhuseleko kutshintshiselwano:
Ukuba iimpahla ezibuyisiweyo azihambelani nemiqathango yale nkqubo yokubuya kunye nokutshintshiselana，Inkampani ayizukukwamkela ukubuya kwakho，Akukho mbuyiselo。
Ukuba uyasilela ukubuyisa i-invoyisi、Izixhobo okanye izipho(Ukuba kukhona enye)Ye，Inkampani inelungelo lokutsala irhafu ye-invoice kwintlawulo osele uyihlawule、Ilungelo kwixabiso lentengiso lezinto okanye izipho。
Ukuba awuyibuyisanga i-invoice ngendlela ethile、Izixhobo okanye izipho,Kodwa inkampani ayikhuphi irhafu ye-invoice、Ixabiso lentengiso lezinto okanye izipho，Okanye khange ubuze ukuba ubuyise ezi zinto sele zikhankanyiwe、Iyafundisa，Ayinakuthathwa njengokurhoxiswa kwamabango afanelekileyo yinkampani。
Abathengi banokubiza umnxeba emva kwenkampani emva kokuthengisa。
Zine、Ilungelo lokubuya elingentla alisebenzi kwii-odolo zezi ntlobo zilandelayo zeempahla:
Iimveliso ezenzelwe wena，Umzekelo，Iimveliso zikrolwe oonobumba bokuqala bamagama okanye zenzelwe abathengi；
2.Naziphi na ezinye iimveliso ezazisiweyo kumthengi ukuba azinakubuyiselwa ngenxa yendalo yazo xa umthengi engenisa iodolo。
Ixesha lokuposa: 2020-04-30 16:04:28